Global Voices teny Malagasy · 24 Janoary 2014
Tantara tamin'ny 24 Janoary 2014
Mitombo Be Ny Aretina “Chikungunya” Ao Karaiba
Karaiba24 Janoary 2014
Efa zatra mizaka ny anjara aretiny noho ny kaikitra moka ny ao Karaiba, saingy ankehitriny tena iray vaovao no mitranga: Chikungunya, izay niely niparitaka manerana ny faritra hatramin'ny volana lasa teo iny.
Fototra 3 Enti-manakatra Ireo Hetsi-panoherana An'i Compaoré Ao Burkina Faso
Afrika Mainty24 Janoary 2014
Nisy hetsi-panoherana goavana nitranga ny Sabotsy 18 Janoary 2014 teo hanoherana ny fanavaozana ny Lalàm-panorenana naroson'ny Filoha Blaise Compaoré. Inona no dikan'ireny hetsi-panoherana ireny?
GV Face: Mivantana Avy Any Amin'ny Fihaonan'ireo Arabo Bilaogera #AB14
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Janoary 2014
Hisham Almiraat talen'ny GVers Advox, Amira Al Hussaini tonian-dahatsoratry ho an'ny faritra GV MENA , Mohammed Najem tale lefitra ao amin'ny SMEX ary Dalia Othman, mpiara-miasa ao amin'ny Berkman Fellow no mizara amintsika ny fahitan'izy ireo avy amin'ity hetsika miavaka loatra ity.
Vaovao Mafàna: Fipoahana Goavana Nampihovitrovitra Ny Afovoan-tanànan'i Kairo
Vao avy nifoha tao anaty feonà fipoahana goavana izay nampihovitrovitra ny afovoan-tanànan'i Kairo ry zareo Ejiptiana. Ny tatitra tany ampiandohana dia manamafy fa nitranga tany amin'ny manodidina ny Fiadidiana ny Polsiy ao Kairo ilay fipoahana